Anisan’ny tsy nampoizin’izy ireo ary mampitaraina ny maro ny fiakaran’ny vidin’ny menaka. 4.400 Ar teo aloha no vidin’ny iray litatra nefa tafakatra 5.100 Ar ankehitriny ho an’ireo menaka mandeha an-tsinjarany. Ao koa ny lafarinina izay lasa 100.000 Ar ny iray gony milanja 50 kg ankehitriny nefa 80.000 Ar teo aloha. Hatrany am-potony mihitsy no mampiakatra ny vidin’entana noho ny olana sedrain’ireo mpamatsy eo anivon’ny seranan-tsambon’i Toamasina. Saika manana olana amin’ny famoahan’entana avokoa ny ankamaroan’izy ireo, raha ny fantatra hatrany. Mikasika ny siramamy manokana dia nahitana fiakarany 100 Ar isaky ny kilao ihany koa ka lasa 2.500 Ar ny vidin’ny iray kilao ankehitriny raha 2.400 Ar teo aloha. Misy fiantraikany amin’ny vidin’ny mofo sy ny kafe hamidy eny an-tsena sahady moa ireo fiakaram-bidin’ny PPN ireo amin’ny ankapobeny.